Premier league | Mustaqbal Radio
Gooldhaliyaha kooxda Liverpool iyo Xulka Masar, Mohamed Salah ayaa wali laga celin la’yahay shabaqa kooxaha kasoo hor jeeda isaga oo markaana Gool ugu shubay kooxda West Brom kulankii 2-2 kusoo dhamaaday. Salah ayaa haatan gool ka dhaliyay 16 kooxood oo ka mid ah 19-ka kooxood ee ka ciyaara horyaalka premier League marka laga reebo kooxdiisa Liverpool. Saddex kooxood oo kaliya ...
Maxda Kooxda Kubadda Cagta Arsenal ayaa suuqa ka raadinaya markii ugu horreysay tan iyo 1996dii Tababare cusub oo kooxdaas maamule ka noqda. Tababaraha hadda ee Arsenal ayaa todobaadkan ku dhawaaqay in uu isaga tagayo Arsenal marka uu dhamaado Xagaagan,waxaana laftiisa doon doonaya kooxo kale. Arsenal madaxdeeda dhinaca suuqa waxaa ay hadda xiriir la sameeyeen Tababarihii hore ee Kooxda Barcelona Luis ...
Waxaa Maanta wada ciyaari doono kooxaha Chelsea iyo Southampton wareega Afar dhamaadka tartanka FA CUP-ka oo kooxii badiso ay gaari doono Kama dambeeysta Koobkan. Chelsea ayaa la filayaa in ay shaxdeeda kusoo bolowdo xiddigaha Hazard iyo Willian oo kursiga kaydka fadhiyay kulankii ugu dambeeyay ee Burnley, Halka Marcos Alonso isna uu ganaax ku seegi doono ciyaarta. Dhaka kale, Saints ayaa ...
Arsenal oo suuqa dhigeysa xidigo dhowr ah yaa ka mid ah.
Kooxda Arsenal ayaa dooneysa inay iska iibiso xidigaha kala ah Granit Xhaka iyo Shkodran Mustafi iyada oo ku howlan badalka xidigahaas. Labada ciyaaryahan ayaa ku guuldareystay inay soo xerogeliyaan xilli ciyaareedkaan, waxaana laga yaabaa inay qeyb ka ahaato cadaadis ay kula soo wareegayaan tababaraha Arsene Wenger. Xhaka iyo Mustafi ayaa loo ogolaan doonaa inay baxaan haddii dalab kasta oo soo ...
Manchester United oo guul taariikhi ah gaartay una gudubtay finalka FA CUP-ka
Manchester United ayaa iska xaadirsay kama dameysta tartanka FA CUP-ka England kaddib markii ay xalay garaacday Kooxda Tottenham. Kulanka oo ka dhacay Garoonka ay sida kumeel gaarka ah ugu ciyaaarto Tottenham ee Wemplay ayaa waxaa ay ciyaartii ka dhacday ku dhamaatay 2-1 oo ay Man Uited ku badisay. Tottenham ayaa la hormartay Goolka waxaana daqiiqaddii 11aad u dhaliyay Dele Ali,waxaase ...
Manchester City oo dalab kale ka gudbisay xidig ay ku hungowday suuqii janaayo.
Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhawaaqday inay dib uso celisay xiisaha ay u qabto xidiga kooxda Leicester City Riyad Mahrez. Intii lagu jiray suuqa kala iibsiga Janaayo, City ayaa bilaabay dalab xilli dambe ah oo ay ku saxiixaneyso Mahrez, waxaana ay isku diyaarinayeen inay bixiyaan 60 milyan oo ginni si ay u saxiixaan xiddiga heerka caalami ee ...
HORDHAC: Tottenham Vs Man United+Safafka suurta galka ah.
Waxaan eegeynaa kulanka xiisaha badan ee u dhaxeey kooxaha Tottenham iyo Manchester United waana Semi-Finalka koobka FA CUP-ka ciyaarta ayaana ka dhici doonta garoona Wembley. XOGTA KULANKA: Kulanka: Tottenham Vs Man United: Tartanka: FA Cup Wakhiga: 7:15 Fiidnimo Garoonka: Wembley Stadium XAQIIQOOYINKA KULANKA: Labada kooxood ee Tottenham iyo Man United ayaa wada kulamay 10 kulan oo hore oo ...
Arsene Wenger: “Mustaqbalka Santi Cazorla ee Arsenal weli ma dhamaan”
Arsene Wenger ayaa diiday inuu meesha ka saaro inuu qandaraaska u cusbooneysiiyo qadka dhexe ee kooxda Arsenal Santi Cazorla hadii uu taam u noqon karo ka hor dhamaadka xilli ciyaareedkan. 33-sano jirkaan ayaan u ciyaarin Gunners tan iyo bishii October 2016, waxaana uu qiray bishii Janaayo in uu ku soo laaban doono xilli ciyaareedka 2018-19, waxaana u badan inuu rajo ...
West Ham United oo dooneysa inay si joogta ah ula wareegto goolhaye City ay leedahay.
Kooxda West Ham United ayaa lagu soo waramayaa inay si joogta ah ula wareegto goolhayaha Manchester City Joe Hart. Hart ayaa xilli ciyaareedkan u ciyaaray kooxda Hammers, ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka England ayaa 22 kulan u saftay kooxda tartamada oo dhan. 31-jirkaan ayaa sameeyay dhowr qalad oo isdaba joog ah – oo ay ku jirto kulankii barbaraha 1-1 ay ...
Pep Guardiola oo wadahadalo qandaraas kordhin ah la furay kooxdiisa City.
Tababaraha Manchester City Pep Guardiola ayaa xaqiijiyay inoo wadahadalo qandaraas kordhin ah la gaaraya kooxda hogaanka u heysa dhamaadka xilli ciyaareedkan. 47 jirkaan, Premier League iyo EFL Cup kula guuleystay xilli ciyaareedkiisii ​​labaad ee Etihad Stadium, ayaa heysta wax ka yar 12 bilood oo uu uga harsan yahay heshiis seddex sanno ah oo uu City u saxiixay sannadka 2016ka. Guardiola ...
Chelsea ayaa caawa booqan doonta garoonka Turf Moor iyadoo halkaas kula ciyaari doonta kooxda Burnley ciyaar xiisa badan oo ku tirsan Horyalka premier League. Kooxda Chelsea ayaa haatan 8 dhibcood ka dambaysa kooxda Tottenham iyada oo ay waliba u harsan yihiin 5 kulan oo premier League ah. Kooxda Burnely ayaa dhankeeda soo galaysa iyada oo 2 dhibcood oo kaliya ka ...
Kooxda Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay xiiseyneyso saxiixa qadka dhexe ee kooxda Wolverhampton Wanderers Ruben Neves. 21 jirkaan ayaa si lama filaan ah ugu biiray Wolves xagaagii hore , waxaana uu qaab ciyaareed fiican u soo bandhigay xilli ciyaareedkan, isagoo dhaliyay lix gool, islamarkaana uu caawiyay 4 gool 39 kulan oo uu u saftay kooxdiisa. Sida laga soo xigtay ...